WAR DEG DEG: Xasan Xanafi Xaaji oo saaka lagu toogtay Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Fulintan xukunkan dilka ayaa goor dhow ka dhacay Fagaaraha School Polizio, halkaasoo ay goob joog ka ahaayeen Saraakiil ka tirsa Maxkamada ciidamada qalabka sida.
Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada qalabka sida ayaa 3-dii bishii Maarso dil toogasho ah ku xukuntay Xasan Xanafi.
Hase ahaatee waxaa uu ka qaatay Racfaan, iyadoo 26-kii bishii hore Maxkamadda sare ee Ciidamada qalabka sida ay mar kale ku xukuntay dil toogasho ah.
Labo maalmood ka hor ayay aheyd markii maxkamadda Ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ah ku fulisay labo ruux oo ku eedeysnaa dilkii Wariye Hindiya Xaaji Maxamed oo ka shaqeyneysay Warbaahinta dowladda.
Maanta ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada muqdisho shirka wadatashiga qaran